(၁၀)တန်းအောင်ကျောင်းသားများ...Result စောင့်ရင် — MYSTERY ZILLION
April 2009 edited October 2009 in Other
အရင်ဆုံး...အတက်များတဲ့ (Bus car) (အဲ..မှားလို့):P သင်တန်း(၁)ခု နဲ. စကြရအောင်..
IDCS (International Diploma in Computer Studies) ဆိုတဲ့ ..International သင်တန်း(၁)ခုနဲ့ စရဆွေးနွေးရအောင်....
IDCS, IADCS, BCIS ,MSC(Hons:) ထိတက် လို့ရတယ် လို့ သိရတယ်။ ဘာတွေလိုလဲ...ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရ မှာလဲ ...မသိသေးတဲ့ သူတွေကို သိအောင်...သိပြီးသားသူတွေက Knowledge တွေ မျှေ၀ပေးစေချင် ပါ တယ်။ ကျေးဇူးပါ။:79:
IDCS ကို ကျနော်လည်း MCC မှာတက်နေတာဆိုတော့ သိသလောက် ၀င်ပြောပြပါ့မယ်..
IDCS ဆိုတာ International Diploma in Computer Studies ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒီဟာကို UK က NCC Education ကနေ ပေးတဲ့ Diploma ဖြစ်ပါတယ်.. ။
တစ်နှစ်တက်ရပြီးတော့ ခြောက်လတစ်ပိုင်းနဲ့ Semester နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်.. Semester တစ်ကို ၆လ တက်ရပါတယ်...။
1. Computer Technology ( CT )
2. Programming Method ( PM )
3. Fundamental of Hardware and Operation System ( FHOS )
4. Visual Basic.NET ( VB.Net)
5. Business Communication ( BC )
6. System Development ( SD )
7. Networking ( NW )
Semester တစ်ကို4ဘာသာစီသင်ရပါတယ်..
e.g. CT, PM, FHOS, VB.Net က first semester မှာဆိုရင်.. BC, SD, NW, Java က Second semester မှာ သင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
စာမေးပွဲကြေးက ( ကျနော်တို့ဖြေတုန်းက $ 360 ဖြစ်ပါတယ်.. အခုတော့ $330 ဖြစ်ပါတယ်)
စာမေးပွဲပုံစံက.. Local Exam ရယ်.. Global Exam ရယ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်..
Local exam အတွက် ဖြေရမယ့် ဘာသာရပ်တွေက PM, VB.Net , FHOS, Java , NW ဖြစ်ပါတယ်.. စုစုပေါင်း အမှတ် တစ်ရာဖိုးမှာ assignement က 75 % exam က 25 % ဖြစ်ပါတယ်
Local ဘာသာရပ်တွေက သိပ်ပြီးတော့ မခက်ခဲပါဘူး Assignment ကတော့ နည်းနည်း အားစို်က်ရပါတယ်.. Local တွေက မိမိတို့ ကျောင်းမှာပဲဖြေရတာပါ..(ဥပမာ ကျနော်ဆို MCC မှာပဲ.. KMDက သူဆို KMD မှာပဲ ဖြေရတာပါ )
CT , BC နဲ့ SD က Global Exam တွေဖြစ်ပါတယ်.. Global ဆိုတာက စာချည်းပဲ အမှတ် ၁၀၀ ဖိုးဖြေရတာပါ. Global ကတော့ ခက်ပါတယ်.. BC က နာမည် အရမး်ကြီးပါတယ် (ခက်တဲ့နေရာမှာ :P )
MICT မှာ သွားဖြေရပါတယ်.. (ကျနော်ဆို CT ဖြေတုန်းက စာလည်းမရ.. အခန်းကလည်း အေးစက်နေတာပဲ :P) Conference Hall မှာလေ..
Center တွေ အကုန်လုံးက ကျောင်းသားတွေ အကုန်ဖြေရတာပါ.. KMD ရော MCC ရော Informatic ရော အားလုံး တစ်နေရာထဲမှာ ဖြေရတာပါ..
စာမေးပွဲက ဘယ်လတွေမှာ ရှိလဲဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ လေးလမှာရှိပါတယ်.. လတွေတော့မမှတ်မိပါ :P
အဲလေးလရဲ့ First Sunday မှာ Global တွေ ဖြေရပါတယ်..
Local တွေကတော့ အဲရှေ့လမှာဖြေရပါတယ်.. အဆိုင်းမန့်ရောပါ..
စာမေးပွဲအောင်စာရင်းက ဖြေပြီး သုံးလအကြာမှာထွက်ပါတယ်
သင်တန်းကျောင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင် ကျနော်သိသလောက်.. KMD ရယ် MCC ရယ် Informatic ရယ် သုံးခုလောက်ရှိပါတယ်..
ဘယ်မှာပဲ တက်တက် မိမိရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုသာ အရေးကြီးပါတယ်..
ပြီးတော့ တစ်ခုပြောလိုတာက Assignment တွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်တတ်တာမို့ပါ..
ကျနော်လည်း အခု တက်နေဆဲပါပဲ.. First Semester ဖြေပြီးတော့ အခု Semester ပြန်တက်နေရပါပြီ..
ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းကို သိချင်ရင် ထပ်ပြောပေးပါ့မယ်
ကျနော်သိတာပြောရရင် KMD , MCC က NCC က diploma ကိုပေးတာပါ။ informatics က informatics diploma ကိုပေးပါတယ်။ Courses တွေမတူပဲကွဲပါတယ်။
KMD မှာကတော့ BSc ကို UK Metropolitan Uni ကပေးတဲ့ Degree အထိတတ်လို့ရပါတယ်။
Exam လတွေက March, June, September, December ပါ။ အဲဒီ လတိုင်းမှာ Section အသစ်လဲ Open ပါတယ်။
ကိုဖုတ်..အဲလေ မောင်ဖုန်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..IDCL နဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ စုစည်းပြီးဖော်ပြစေလိုပါတယ်..ကျွန်တော်မျိုးလည်းတက်ဖို့ အားခဲနေလိုပါ...အော်..ဒါနဲ့ diploma in IT နဲ့ ဘယ်လိုများကွာခြားပါသလဲ...ဘယ်ဟာကိုတက်သင်ပါသလဲ..ဘယ်လိုအားသာချက်..အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်...
ပာုတ်ပါတယ် mgpyone ပြောသလိုပါ ပဲ (ပာဲ ပာဲ ဒါ ဆို အစကဲပြန်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့...ပိုင်တယ်ကွာ..မိုးနတ်သားတို့ကတော့:D)
IDCS မှာတော့ BC က အခက်ဆုံးပါ..IDCS ကျောင်းသား အများစုက BC ထိကျတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ..ပုံမှန်လုပ်သွားရင်အောင် နိုင်ပါတယ်(သူများကို သာပြောတာ...ကိုယ်တောင်ပုံမှန်မလုပ်နိုင်ပါ:D) 1 subject ကျ၇င် 1 subject စာ Exam Fees ပြန်သွင်းရပါ တယ် Fees အခုတော့ $80 ဖြစ်ပါတယ်။ IDCS က အခု Version ပြောင်းသွားပါတယ် Version 08 လို့ ခေါ် ကြပါတယ်။ တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ တော်တော် များ ကြတယ်(လူများတာကိုပြောတာပါ.-ျ နဲ့မပာုတ်ဘူး ြ-..နော်.စိတ်ဓါတ်ကျသွားမှာစိုးလို့:D) ကျွန်တော်က တော့ အားပေးပါတယ် တက်ကြပါ။ International Diploma ကိုစ၇ိတ်သက်သက်သာသာ နဲ့ ရ တာ ပါ :39:ပာိုမှာသွားတက်ရင်ဒီထက် ပိုကုန်ပါတယ်...( IDCS နဲ့ Diploma in IT နဲ့ ကွာပါတယ်..Diploma in IT က ဒီမှာပဲသုံး ရ မှာပေါ့ ...IDCS ကတော့ ရပါတယ် International ဆိုတော့ ...) ကြိုက်တဲ့ country မှာသုံး ပေါ့ ...သင်ကြားမှု ကတော့ ကွာတာပေါ့ ..(:D သိတဲ့ လူကြီးတွေ က တော့ ငြိမ်နေတာပေါ့ ..ကလေးတွေကဘာတွေ ပြောမလဲံ စောင့် ကြည့် နေ တာထင်ပါရဲ့) ၀င်ေ၇ာက်ဆွေးနွေးကြပါ ...ပညာများ၊အ တွေ့ အကြုံ များမျှေ၀ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးပါ....:77:
DIT ကတော့ IDCS ရယ် HDSE ရယ်ကို နဲနဲရောထားတလိုပါပဲ။ သိတ်မဟုတ်လှပါဘူး။ IDCS က individual assignment က DIT မှာ Group project ဖြစ်နေတာ မြင်ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ မသိဖူးနော်။
IDCS က international ဆိုတော့ပိုအားပေးပါတယ်။ IDCS ကို IAD လောက်ထိ အနဲဆုံးတက်သင့်ပါတယ်။ BCIS အထိပြီးအောင်တတ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Assignment တွေလုပ်ရင်း Skillset ကိုလုပ်ယူပေါ့။ အာမခံချက်ကောင်းတဲ့ Diploma မျိုးပါ။ ကျနော်သိတလောက်ပေါ့
MARCH,JUNE,SEPTEMBER & DECEMBER တို့ဖြစ်တယ် လို့ ထင်ပါ တယ်။မှားရင် လည်းပြန်ပြော ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးပါပဲ ...
DIT(Diploma in IT) မှာတော့ ပာုတ်ပါတယ် Project ကို Group လိုက်လုပ်ရ ပါ တယ်။
IDCS(International Diploma in Computer Studies) မှာတော့ အသေးစား(အကြီးစားတော့..ပိုအရသာရှိတာပေါ့)Project(small website)လေး လုပ်ရပါတယ်..:5:
အကောင်းဆုံးကတော့ gce တို့ toefl/ielts စတာတွေဖြေပြီး တော့ တစ်ကျောင်းကျောင်းကိုလျှောက် ပြီးတော့လစ်တာပဲအေးတယ်
ကျနော်ဒီစကားကိုနဲနဲ ငြင်းပါမယ်။ ဒါအကောင်းဆုံး Option လို့မပြောပါဘူး။ မြန်မာငွေ သိန်း 50 အတွင်းမှာ Degree 1 ခုရပါမယ်။3years အတွင်းကြိုးစားရင် skill ကောင်းကောင်း knowledge ကောင်းကောင်းရပါမယ်။
ပြည်ပကိုထွက်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ Budget limitation ရှိရင် BCIS ကအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။3years အတွင်း အလေလိုက်နေပြီးအောင်သွားသူတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကြောင့်တော့ ဒါမကောင်းဘူး လို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။
တကယ်ကြိုးစားချင်ရင် Self-study လုပ်ရမှာပါပဲ။ Self-study လုပ်ရရင် ဘာလို့ပိုက်စံပေးတက်ရမှာလဲလို့ မေးဖူးသူရှိပါတယ်။ ကျနောပြောဖူးတလို အာမခံချက်ကောင်းတဲ့ Dip/Degree ရမယ်။ Fees ပြန်တွက်ကြည့်ရင် Sg / Au / UK အားလုံးထက်သက်သာပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲ Self-Study လုပ်မှအောင်တာပါပဲ။ မိဘဆီမှာနေပြီး စာသင်ရတာ ပိုလွယ်ပါတယ်။ Stress နဲမယ်ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Info ပြောတလို prepare လုပ်ပေါ့။ မဟုတ်ရင်တော့ လမ်းကြောင်းတခုသေခြာစ စဉ်းစားဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကြံ်ပေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့။ သူ့အတိုင်းအတာ အတွင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ် လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။
Just my opinion ပါ
ကျနော်လည်း အကောင်းဆုံးက Self-study ပဲလို့ထင်ပါတယ်..
ဘာပဲတက်နေတက်နေ.. မိမိရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုသာ အရေးကြီးပါတယ်..
လက်မှတ်တွေကတော့ အရေးကြီးတာ ကြီးတာပါပဲ.. ဒါပေမဲ့. အရည်အချင်းက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်..
IDCS ဆိုတာ International Diploma in Computer Studies ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်..........
အခု exam fee တက်သွားပါပြီ။:(( $400 ဖြစ်သွားပါပြီ။ :2:
IDCS 2nd term မှာ programming စသင်ရပါတယ်။ KMD က IAD မှာ C++, Java, VB.net ယူရပါတယ်။ group project လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒုတိယနှစ်အပြီးမှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများ လိုင်းပြောင်းကုန်ပါတယ်။ :2: နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့စိတ်ကူးရင် GCE, SAT စတာတွေလည်း တစ်ခါတည်းတက်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်ကျောင်း ဘယ်နေရာမှာပဲ တက်တက်ပါ.. သက်ဆိုင် ရာ ဘွဲ့တစ်ခုတော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘွဲ့ရလို ဟို specialized training လိုက်တက်၊ ဒီ Training တွေလိုက်တက် နေတာနဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျများသွားပါမယ်။
SelfStudy လုပ်လိုက်တာက ပိုကောင်းပါသေးတယ်။
1 နာရီကို $100 ပေးရတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုမှာ ရှေ့က သင်ကြားနေတဲ့ ဆရာက တော့သူ့အစွမ်းကုန် ရှင်းပြသွားတာပဲ ဒါပေမဲ့ လိုက်ရတဲ့ သူတွေက ပေးရတာနဲ့ မတန်ဘူး။
အဲ့အစား Google Search မှာ မိမိသိချင်တာလေးတစ်ခုကို 1 နာရီလောက် ထိုင်ပြီး ရှာဖွေ လေ့လာလိုက်တာက အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း ငွေကြေး သက်သာပါလိမ့်မယ်။
Tat's y i appreciate Mr Google!:77:
ဆယ်တန်း ဖြေထားပြီး ကျောင်းသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အားလပ်တဲ့ အချိန် ကိုု **အကြိုးရှိအောင် သင့်တင့်တဲ့ စာပေလေ့လာမှုလုုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကိုုယ်ဝါသနာပါတာဖြစ်ဖိုု့ က ရာနှုုန်းပြည့် ဖြစ်ရမယ်။ မဟုုတ်ရင်တော့ ကုုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေ အရမ်းနှစ်မြောဖိုု့ ကောင်းမှာ အမှန်ပါ။ သင်သာ စီးပွားရေးပိုုင်းတွေ နဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုုင်းတွေ ကိုု အသေအလဲ မုုန်းနေရင် IADCS မတက်ပါနဲ့။ သင့်မှာ အနုုပညာပါရမီမရှိပဲ Graphic ကြီးတက်နေလဲ မှားမှာပဲဗျ။ သင်တန်းတွေက သင်တာက အသုုံးပြုပုုံပါ။
တစ်ခြားနိုင်ငံမှာတော ့မသိဖူး....ကျွန်တော်တို ့နိုင်ငံမှာ..လုံးဝမကောင်းပါဘူး..
ဟိုတစ်လောက...DCIS တတ်နေတဲ ့သူငယ်ချင်းနဲ ့တွေ ့တယ်.....ဇူးဇူးတို ့နဲ ့..IAD အထိအတူတူ
တတ်ခဲ ့တာ..ဇူးဇူးက...ဆက်မတတ်တော ့ဘူးလေ...သူတို ့က...ဆက်တတ်သွားတယ်...
အဲ ့ဒါနဲ ့တွေ ့တော ့...သူကိုု မေးကြည် ့တာ...ဘယ်လို လဲ လို ့..Java code တွေ..VV code တွေ..ပိုင်ပြီးလားလို ့မေးတော ့....ရီတယ်...ခင်ဗျ...
အရင်လို ပါပဲ..ကွာတဲ ့....ဘာလို ့ဆက်တတ်နေလဲ ဆိုတော ့....ဘာမှ မပြောသွားဘူး...
ကိုယ်တတ်ချင်တာကို.....professional လိုင်းပဲ တတ်ပါဂျာ...
အဲဒီအကြောင်းတွေ မပြောချင်လို ့ပါ...ကိုယ်သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ တဲ ့ကျောင်းဆိုတော ့...
သင်တဲ ့ဆရာတွေမှာ...ကောင်းတဲ ့ဆရာတွေ ရှိသလို ..မကောင်းတဲ ့ဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်..
project လုပ်ပြီဆိုပါတော ့ဂျာ......ဆရာမက..သူဟာကို..သူပဲ ရေး..ကျောင်းသားတွေက...
အော်တော်တော်တတ်သွားပြီပေါ ့နော်...ကြိုးစားနိုင်ရင်တော ့ကောင်းပါတယ်...
ဒါပေ ့မယ်..ဘာပဲ ပြောပြောပါ..ကျွန်တော်ကတော ့....
software ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...hardware ပဲ ဖြစ်ဖြစ်....professional လိုင်းပဲ ရွေးစေချင်တယ်..
academe လိုင်းကို...ကျွန်တော်တို ့...နိုင်ငံအတွင်းမှတော ့...မလိုက်စေချင်ဘူး..ခင်ဗျ..
နောက်တော ့...သဘောပေါက်လာပါလိမ် ့မယ်...
ဇာနည်ရေ ဖိုးစီတစ်ခုပြောမယ်ဗျာ။ ဖိုးစီ ဇာနည်ပြောတာတွေ ကို လက်မခံဘူးဗျ။ တစ်ကယ်တမ်း မှားနေတာက သင်တန်းတွေ မဟုတ်ဘူး လာသင်တဲ့ လူတွေ။ တစ်ကယ်တမ်း သာ Computer University မကောင်ရင် စေတန်လိုလူမျိူး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိ MZ ဆိုတာလဲ ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ IADCS လဲ အဲ့လိုပဲ။ ကိုဒီဘီအေကြီးကိုကြည့် BCIS တက်ပြီး အခု ခန့်ခန့် ထည်ထည်နေနိုင်တယ်။ တစ်ကယ်တမ်းဖြစ်နေတာက လာတက်တဲ့ သင်တန်းသားတွေ ပဲ။ Internet ရှိရဲ့သားနဲ့ မရှာချင်။ မရှာတော့ မတတ်ဘူး။ Tutorial တွေ အခမဲ့ မရှာချင် မရှာတော့ မတတ်ဘူးဗျ။ သင်တန်းဆိုတာ Guide Line လောက်သာ ချပေးနိုင်တာ။ တစ်ကယ်တမ်းလေ့လာရမှာက သင်တန်းသားကိုယ်တိုင်ပဲ။ လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံ ကျောင်း တက္ကသိုလ်တွေ ကနေ ပဲ ပညာရှင်တွေ ထွက်နေကြတာ အားလုံး အမြင်ပါပဲဗျာ။ မကောင်းဘူးသာမှန်ဗျာ အဲ့ လို ထွက်လာစရာမရှိဘူး။
တချို့က အတန်းတွေတက်တာပါ ပညာသင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Exam အောင်ဖို့က သူ့ရည်ရွယ်ချက်။ အဲလိုလူကများတယ်ထင်တယ်ဗျာ။ BCIS ပြီးသွားတယ် Hello World ကိုတောင် အလွတ်မရေးနိုင်တဲ့လူတွေ WLAN နဲ့ WAN မကွဲတဲ့လူတွေ Select statement syntax မသိတဲ့လူတွေ ( အဲ ၃ မျိုးလုံးမသိတဲ့လူတွေ) အများကြီးပါ။ သူတို့ ဒီ ၃ နှစ်မှာ ဘာလုပ်နေကျလဲမသိဖူးပေါ့။ သင်တန်းအပြစ်ပဲ ပြောဖို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်နော် အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းထဲမှာ အဲလိုလူမျိုးရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလဲ စာရှင်းခိုင်းဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ နားလဲမလည်ဘူး။ အကုန်တော့ အလွတ်ကျက်နိုင်တယ်။ ကောင်းရော
IAD ပြီးတဲ့အချိန် အပြင် Project တွေလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ BSA / BSD ကသင်ပေးလိုက်တဲ့ Analyzing , User Dealing တွေအသုံးဝင်သင့်တလောက်ဝင်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ သူ့ကို IDCS , IAD ကတင် Programmer တယောက် Analysis တယောက်ဖြစ်စေခဲ့တယ် ပြောရင်တောင်ရနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ Masterတန်းရောက်သွားပါပြီ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့ တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ Under grad ပြန်တက်ဖို့ကျိုးစားနေတယ်ဗျာ
IDCS / IAD / BCIS တွေက Academic ထုံးစံအတိုင်း Knowldege ပေးတာပိုများပါတယ်။ Skillset ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Skillsets ကတော့ လုပ်ယူရမှာပါ။ သူတို့ကမှတတ်အောင်မသင်ပေးတာလို့ပြောရင်တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုပေါ့ဗျာ ။
ဘယ်ကျောင်းကမှ တတ်ကျွမ်းအောင်မသင်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ အတန်းထဲမှာ တတ်အောင်သင်လိုက်တယ်ထင်ရင် မှားပါမယ်။ ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘယ် Academic ကမှ professional ဖြစ်အောင်မသင်ပေးပါဘူး။ မိဘဆီမှာမဟုတ်တော့ ဖိအားလေးပိုတယ်။ ပိုအားထုတ်တယ်။ အဲဒါကျောင့် ပိုကြိုးစားကျတယ်ထင်တာပဲ။
ရန်ကုန်မှာ မိဘအိမ်နေပြီး စာလုပ်ရတာကောင်းတယ်ဗျ။ ဖိအားမရှိ (နည်းတယ်ဗျာ)။ Java ကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့ Java သင်တန်းကောင်းကောင်းတွေကြီးပဲ မလိုပါဖူးဗျာ။ Java code တွေနဲ့ပျော်မွေ့ဖို့လိုပါတယ်။ အဲလိုပါပဲ Exam အောင်ဖို့ပဲ စိတ်ထဲရှိတယ့် လူတွေအတွက် ဘယ်မှာတက်တက် အတူတူပါပဲဗျာ
I've done till IAD level, but I think I'm not really confident what I got from that2levels , DIT and IAD.
If u want to go through from DIT , u should attend v.b net at other school, otherwise , you should give some more money to project room ,
But i want to suggest u all is to attend in advanced countries for that field, but what i don't mean is that they are not really good for you,
it is also important to notice that ur environment and even u can get some knowledge from your different type of international friends,
အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့။ သူ့အတိုင်းအတာ အတွင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ် လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။
ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာက တက်တဲ့သူပေါ်ပဲ မူတည်တာပါ။ တချို့တွေက bcisသာ ပြီးသွားတယ် ဘာမှမလုပ်တတ် မကိုင်တတ်။ တချို့ကျတော့လည်း iadပြီးတာနဲ့ အလုပ်တန်းရတယ်.. iad နဲ့ msလက်မှတ်ကိုင်ပြီး တကယ်အလုပ်လုပ်တတ်ရင် နိုင်ငံခြားမှာတောင် အလုပ်ရဖို့ ဆိုတာ မခက်ပါဘူး။ ကိုယ့်တွေမြင်ဖူးတဲ့သူတွေအကြောင်း ပြောပြတာပါ။
၁၀တန်း အောင်ထားသော ကျောင်းသားများအနေနဲ့ result ကိုသာစောင့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ကြားကာလမှုာ speaking သင်တန်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ရက်တိုသင်တန်းငယ်များကိုသာ တက်စေချင်ပါတယ်။ ၁၀ တန်းကျောင်းသားဘဲ...တစ်နှစ်လုံး စာကျက်လာတာ ခရီးထွက်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့.....သင်တန်းတက်ရင် မရတဲ့ ဗဟုသုတတွေရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း IDCS တက်ဘူးပါတယ် .... မနှစ်ကပါ... .ကုန်သည်လမ်းက KMD မှာပါ....တက္ကသိုလ်ကတော့ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် တက်နေပါတယ်... နှစ်လယ်လောက် ရောက်တော့ ဟိုမနိုင် ဒီမနိုင်ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံး IDCS ကိုဘဲလက်လျှော့လိုက်ပါတယ် ....စာမေးပွဲကြေး ၄ သိန်းကျော်သွင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာပါ... ကျောင်းသားများကို မှာချင်တာက ကိုယ် တက်မည့်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို သာ ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက် ရောက်အောင်သွားပါ.... မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဲ တက္ကသိုလ်တက်ဆက်တက်မဲ့ လူတွေကိုတော့ ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ တတ်နိုင်ပါက မတက်စေချင်ပါ.... ဒါကလည်း ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ သင်တန်းရူးချိန်ပေါ့.... သူများ LCCI ဆိုတိုင်း LCCI .....သူများ IDCSဆိုတိုင်း IDCS ....သူများTOFELဆိုတိုင်း TOFEL..... တက်ကြတာများပါတယ်...
မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဲ တက္ကသိုလ်တက်ဆက်တက်မဲ့ လူတွေကိုတော့ ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ တတ်နိုင်ပါက မတက်စေချင်ပါ.... ဒါကလည်း ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ သင်တန်းရူးချိန်ပေါ့....
အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းသင်တန်းတက်တဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ ဒါကမှန်တာပေါ့လေ။ uflတို့eppတို့လိုမျိုး တက္ကသိုလ်တွေတက်ကြတဲ့သူတွေကျတော့ တခြားအသက်မွေး၀မ်းကျောင်း ဒီပလိုမာတစ်ခုခုမတက်ထားရင် ကျောင်းပြီးတော့ လုပ်စရာအလုပ်မရှိတော့ဘူးလေ။ ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရပြီးတော့မှ သင်တန်းထတက်ရင်လည်း အချိန်ထပ်ကုန်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်စာလုပ်နိုင်ရင်၊ ကိုယ်တက်နေတာ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သင်တန်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ပြိုင်တက်တာ ကောင်းပါတယ်။ idcs ဖြစ်ဖြစ်၊ lcci ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ လက်မှတ်နှစ်ခုရထားတော့ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အလုပ်အကိုင်လွယ်တာပေါ့။ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ကိုယ်၀ါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်နှစ်ခုလုံးကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်းလေ့လာနိုင်တာပေါ့။
daydream wrote: »
ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တစ်မျိုးဗျ အေ၀းသင်တွေတော့မသိဘူး တစ်ချို့day တက်ရတဲ့သူတွေက
တော့မလွယ်လောက်ဘူး နှစ်ခုစလုံးခွတက်ရတာ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေမှာလည်းရှိတယ်
IDCS အောင်ပြီး ကျောင်းမှာကျသွားတာတို့ကျောင်းမှာအောင်ပြီး IDCS မှာ fail ဖြစ်တာနဲ ့
တစ်ချို ့ဆိုထူးချွန်ပါတယ် နှစ်ခုစလုံးမအောင်ဘူးခင်ဗျ :D အချိန်ကုန်တာတော့ကုန်တာပေါ့
လေးကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဘွဲ လေးတစ်လုံးလောက်တော့ရစေချင်တယ် အဖိုးတန်သည်မတန်သည်အသာထား
ရသင့်တယ်လို ့ထင်ပါတယ် တကယ်ထူးချွန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် နှစ်ခုလုံးအောင်တဲ့သူပေါ့နော်
ဒါပေမယ့်မလွယ်လောက်ဘူး တော်တော်ရှားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ကတော့တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ it နဲ ့အသက်မွေး၀မ်းကြောင်းပြုမယ်ဆိုရင်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လောက်ပဲလုပ်စေချင်တယ် ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပါကျန်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမြင်ကြ
ရှားပါဘူး.. နေ့အိပ်မက်နဲ့တူတူ တက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆို အကုန်လုံးနှစ်မျိုးလုံးအောင်တာပဲ။ နေ့အိပ်မက်အပါအ၀င်ပေါ့.. ။ Dတွေ Cတွေတောင် ပါလိုက်သေး။:))။ uflနဲ့iad၊ bbmနဲ့iad၊ တချို့ဆို mcနဲ့iadပြိုင်တက်တဲ့သူတောင်ရှိသေး။ lcciမှာ ဘာသာတိုင်းDရပြီး uflမှာ Cတွေတန်းစီနေတဲ့သူလည်း မနည်းဘူး။ dbaတို့ဘာတို့တက်ရင်း အခန်းထဲကလူတွေအံ့လောက်အောင်တော်ကြတဲ့ ကျောင်းသူတွေလည်းရှိတယ်။ တကယ်ပြောတာ. မယုံရင်လက်မှတ်တောင်းပြမယ်.. :P ဒီလောက်အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ခေတ်မှာ အချိန်တွေသုံးရတာ တော်တော်စိစစ်နိုင်မှ တော်ကာကျလိမ့်မယ်။ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ မြန်မာပြည်မှာ ၁၆နှစ်ဆိုဆယ်တန်းအောင်ပြီ။ ဘွဲ့ရရင် အသက်နှစ်ဆယ်။ တကယ်လို့ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ကမဟုတ်တဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုရသွားရင် အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်မှ တစ်ခါ ကိုယ်လုပ်ချင်တာအတွက် ကျောင်းထပ်တက်မယ်ဆိုရင် . ဟူး.. မလွယ်ကြောပဲ..။ နှစ်ဆယ်ကျော်ပြီး ဘယ်နှစ်နှစ်ထိ မိဘပိုက်ဆံနဲ့ ကျောင်းတက်နေရဦးမှာလဲ။
အဲဒါတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေလည်း အောင်တာပဲဗျ။ day တက်နေရင်း idcs တက်တာပဲ။ ၂ ခုလုံးအောင်တယ်။ အဲ တချို့ကတော့ idcs ပဲတက်ပြီး ကျတာတွေတောင် ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကြိုးစားမှုနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရင်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဗျ။
ကျွန်တော်လည်း ၂ ခုကို ခွမတက်စေချင်ပါ...လှေနံ ၂ဖက်မနင်းစေချင်ဘာ~~ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ၂ ခု ခွတက်ဘူးလို့ပါ..နောက်ဆုံး idcs ကိုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်....မြန်မာပြည်က ဘွဲက အခုဘဲမကောင်းရင် မကောင်းမယ်....နောင် ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ရတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ပြောင်းလဲလောက်ပြီ...:39::39::39:
ကျနော့်အမြင်ပြောရရင် ... တက္ကသိုလ် တက်တာလည်းတက်ပေ့ါ ... ကိုယ်ဝါသနာပါတာ လည်းလုပ်ပေါ့ ... တက္ကသိုလ်တက်နေရင် အချိန်တွေ အများကြီးပိုနေတာပဲ။ တခြားလေ့လာစရာတွေ အများကြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျာ ... တကယ်လိုချင်ရင်ပေါ့ ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အသက် ၂၀အရွယ်ဆိုရင် အားလုံးတတ်ထားမှ (supermen) ဖြစ်နေမှတော်ရုံကျမှာ ... ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကလို တစ်ခုကောင်းလုပ်လိို့မရတော့ဘူး။ ဘာသာရပ်ကြီးတွေလည်း ပြန်ပေါင်းသွားပြီလေ။ အရင်တုန်းကတော့ hardware technician, network technician, webdesigner စသဖြင့် ကိုယ့်လိုင်းနဲ့ ကိုယ်ရပ်တည်လို့ ရပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အစုံတတ်ထားမှ ရမယ်လေ။ အခုတောင် New Media ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ပေါ်လာပြီလေ ။